Ọganihu 14 nke Ga - emetụta Email Gị na 2015 | Martech Zone
Ọganihu 14 nke Ga - emetụta Email Gị na 2015
E wezụga na ndebiri email na-anabata, teknụzụ dị n'azụ email agbanwebeghị ọtụtụ afọ iri gara aga. Agbanyeghị, dịka otu n'ime nloghachi kachasị ike na azụmaahịa azụmaahịa, ndị na-ere ahịa na-ahụ nloghachi dị ukwuu mgbe ha na-eme ka teknụzụ zuru oke na-agbasa ozi na ozi ha na-ekesa.
Ndị a bụ Ọganihu 14 na Teknụzụ Nke na-emetụta Email Marketing
Nhazi oge dabere na data obe-channel.
Nnukwu data isi mmalite ga-eri nri amụma na Contextual ọdịnaya na email.
Ikwenye na ozi atụmatụ dị n'etiti email na ahịa ọhaneze.
hashtag Ojiji na ahịrị isiokwu email na-arị elu.
HTML emelitere mmekọrịta gị na ndị ahịa ga-emetụta ụzọ anyị si echepụta ma zipụ ozi ịntanetị.
Marketing akpaaka ga-aga n'ihu na-ahụ ịlaghachi ụba na ntinye ego.
Ọmarịcha Kpọọ-Ime Ihe na isiokwu ndị ga-emepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu ka emeghe.
Iweghachi ọdịnaya na ndozi ọdịnaya ga-agbakwunye ndị debanyere aha gị.
Micro-ezubere iche na nkewa na nkeonwe dabere na ọrụ weebụ ndị ọzọ.
Erslọ Ọrụ Mmasị ga - enye nd ị debanyere aha nnukwu mgbanwe ka ibelata nkụ.
Smart Email ahịa ga-aga n'ihu na-adabere na mkpa na omume ọgụgụ.
Email Marketing ga-agbasa karịa ntụgharị na ala nke olulu a ga-ahụ ka ọ na-enwe mmetụta na elu olulu.
Nchegbu nchekwa ga-aga n'ihu na-akwado nkwenye email na usoro dịka DMARC.
Wearables ga-ekwe ka ọgụgụ nke ozi-e chọrọ ihe anabata imewe ihe nakawa etu esi.
Tags: 2015ala nke foneelukpọọ ka emecohesive email atụmatụctaemail na-elekọta mmadụndị ahịa emailntinye aka na emailhashtag emailozi infographicemail Marketingozi ahịa emailndị mọnk emailemail njikarịchanchekwa emailahịrị ederede emailhavehtagsinternet nke iheakụrụngwa ahịaahia akpaaka ngwaọrụatụmatụ izi ozimicro-ezubere ichemmasị ebeicheghari ọdịnayasecurityelu oluluWearables
You mepụtala oku na-eme ihe na Facebook?
Ihe mere eji abanye n ’oku dị mkpa maka njem Onye Ahịa gị